ahịa - Feinade Ọdụdọ ngwa oru Co., Ltd
email Nkwado 0574-82354293
Adọ-usoro adọ-ọnwụ Relay
Ugbu nlekota agba anọ
Àmụmà Jizi Emekarị Nchebe
Zhuhai pinot technology co. LTD
M mgbe enyi ya na ya ruo ọtụtụ afọ, na ihe mere m nnọọ obi ike na-arụkọ ọrụ na ya bụ n'ihi na m kwere na ọ bụ onye na ahụmahụ, nsọpụrụ ma dị umeala n'obi ndú ndị na-eme ijeụkwụ na The Times. Ọ na-e-emepe emepe. M kwere na n'okpuru idu ndú nke magburu onwe onye ndú, tinyere ndị dị otú ahụ a na usoro nke ngwaahịa na ezi aha, feynard ga-aga ngwa ngwa na aba. Na m na-ọzọ kweere na eze ukwu dị ndụ ruo uche ya.
Zhuhai pinot technology co., LTD. - director nke ndịda China - ren guoqiang
Zhuhai pinuo technology co., LTD. Bụ ihe enterprise na ejisie electric ike usoro nke ụlọ ọha. Ọ nwere a nnyocha sayensị isi nke 20,000 square mita. Ọ nwere r & d emmepe na Zhuhai elu-tech mpaghara na Shenzhen nanshan sayensị na nkà na ụzụ ogige, alaka Beijing, Shanghai na Shenzhen, na ihe karịrị 20 itieutom ke China. Ise engineering mmejuputa na oru ọrụ emmepe e melite ke edere China, n'ebe ọwụwa anyanwụ China, n'ebe ndịda China, n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ China na ndịda ọdịda anyanwụ China, na a tozuru okè na nke zuru okè ahịa na injinịa mmejuputa netwọk e guzosie ike
Ningbo aimei-dongxiong n'ichepụta co. LTD
Dị ka a na-niile mara na, ina moto nchebe anyị ụlọ ọrụ dịtụ ebumnobi. Anyị kwesịrị ịchọta ihe bara uru soplaya na-eme ka anyị na ngwaahịa na akụrụngwa nwere ezi ika mmetụta. Naanị mmeri - mmeri nwere ike ime ka enterprise imekọ ihe ọnụ mmekọrịta ogologo! M na-achọ gị ahụ ezigbo soplaya, a ezi onye ibe!
Ningbo aimei-dongxiong n'ichepụta co., LTD. - onyeisi oche nke osisi - Huang Gụọ-sheng - ọkachamara imewe na n'ichepụta nke elu ugboro elu ugboro elu ugboro ígwè
Ningbo aimei-dongxiong n'ichepụta co., LTD. Bụ ọkachamara emeputa nke "dongxiong ika" elu ugboro plastic ịgbado ọkụ igwe, ultrasonic plastic ịgbado ọkụ igwe na ịcha igwe. Anyị nwere ike hazie akpaaka na ngwá na-abụghị ọkọlọtọ ígwè akụrụngwa dị ka ndị ahịa chọrọ.
Anyị ụlọ ọrụ depụtara ke February 2007, ekpuchi ahịa nke ala okporo, ise ike ọgbọ dị iche iche, na mmanụ ala, chemical ụlọ ọrụ, ụgbọ okporo ígwè, na ulo oru usoro na n'ichepụta. Na dị nnọọ abụọ ma ọ bụ afọ atọ, feinald aghọwo ihe dị mkpa onye nke anyị ụlọ ọrụ. My echiche nke feynard bụ na nwoke na-ere bụ ndidi, na-nnyefe bụ na-adọ, na ndị ọrụ oru nkwado. Ọ bụ dị ka feynard si isi amaka: ọ bụ banyere ọrụ. M kwere na ha nwere ike mma n'ụzọ ọ bụla, na feynard bụ a kwesịrị ibe.
Zheng xiaohua, director nke China huayi gas co., LTD
Huayi gas co., LTD. (Dịrị gaba n'ime ebe kwuru na dị ka "huayi gas") bụ a isi na-ejide enyemaka nke huayi electric otu co., Ltd. na leqing obodo, Wenzhou obodo, Zhejiang Province. Mma site ala usoro iwu ọrụ nke China (CSRC) dịghị.  dịghị. 286, e re-depụtara na Shanghai ngwaahịa mgbanwe na February 1, 2007 na na ngwaahịa koodu nke 600290
Danfoss akpaka akara management (Shanghai) co. LTD
Anyị ụlọ ọrụ na-emekwa ụfọdụ na friji na ntụ oyi akara ngwọta. Si n'ọnọdụ nke azụmahịa, anyị bụkwa ndị a soplaya. Anyị ozi bụ-eme mgbalị nile ka mma magburu onwe ya mma na ezi uche price si ngwaahịa na ọrụ na-eme ka ndị ahịa ihe asọmpi. Na feynard dị na akara na nkà ihe ọmụma anyị. Anyị ụlọ ọrụ tumadi na-eji ụgbọala nke 18.5kw-110kw, na ahịa na oru otu nke feinade na-aga eleta anyị ụlọ ọrụ, na-eme ụfọdụ technical nkwurịta okwu na anyị, na-enyere anyị aka idozi ụfọdụ ngwá nsogbu ọnụ, na-enye anyị ụfọdụ aro ndị bara uru. A n'ezie ezi soplaya bụghị naanị akanyam ngwaahịa, ma ọ bụ ọkụ n'obi ahịa, na-eche ihe ndị ahịa chọrọ, guzo na ndị ahịa si na ọnọdụ na-atụle bụ nsogbu!
Danfoss akpaka akara management (Shanghai) co. LTD. - sunbin
Danfoss (Danfoss) bụ otu n'ime ndị kasị ibu ndị si ọtụtụ mba ulo oru n'ichepụta ụlọ ọrụ na Denmark, tọrọ ntọala na 1933. Danfoss mara maka n'ịkwalite iji elu n'ichepụta teknụzụ na ilekwasị anya ike nche-na gburugburu ebe obibi nchebe. Danfoss bụ a ụwa na-eduga emeputa na-eweta ọrụ nke na friji na ntụ oyi akara, kpo oku na mmiri akara, na nnyefe akara.